Parenting Archives - Page 3 of 3 - Daryeel Magazine
Maqaalkani wuxuu guud ahaan ku socdaa soomaalida ku nool qurbaha iyo guud ahaan qoysaska soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan. Ubadkeena ku dhashay ama ku koray qurbuhu waxay ku jiraan ubadka ugu badan ee la daba galo iyadoo lagu dhaleecaynayo nidaam xumo iyo in ayna aqoon qaabka loola noolaado dadka kale. Waxbadan oo la inagu sheegaa waa run oo waalidka …
Ilmahaaga marna ha caynin!.. Adiga oo ku tilmaamayo tilmaamo xayawaan!..sida dameer baad tahay!.eey batahay!..doofaar baad tahay! ama in aad tiraahdo maalinta aad dhalay maalin kheir ah ma aysan aheyn waad inkaaran tahay!.. Marna ha bahdilin hana ihaanaynin!.. Adiga oo ka duulayo wax yaabo ka maqan ama wax’yaabo uu ku xunyahay!..tusaalo ahaan in aad tiraahdo waa habaaran tahay!..been’loow baad tahay!..waad fool …
Waxa muhiim ah in aynu mar walba ogaanno in korinta ilmuhu aanay ahayn keliya mid jidheed ee ay ugu muhiimsan tahay ilmaha oo loo diyaariyo in uu mustaqbalka qaadi karo masuuliyad xitaa isaga oo da’ yar. Haddaba haddii aad jeclaan lahayd in ilmahaagu noqdo mid masuuliyaddiisa qaadan kara isla markaana noqda mid naftiisa ku tiirsanaan kara waxa aad raacdaa talooyinka …
Inaad Caruurtaada barto waxa saxda ah waa mas’uuliyad gaar ah oo saaran waalidiinta. Hadaba waa kuwan waxyaabaha aad u baahantahay inaad caruurtaada barto. 1) Bar ilmahaaga Deeqsinimada iyo caawimaada. Caruurtu waxa ay noqon karaan kuwa deeqsi ah ama caawimaad badan hadii la baro xiliga ay yaryaryihiin. Dhankale hadii ilamahaagu ku arko adigo deeqsi ah misana dadka caawinaya waxaa hubaal ah …
Maqaalkan waxaan ku soo qaadan doonaa kaalinta waalidka ee waxbarashada caruurta iyo qodob muhiim ah oo ku saabsan doorka waalidka ee ubadka. Waxbarashadu waa aas-aaska horumarka iyo nolosha taas oo uu qof kasta u baahan yahay inuu helo waxbarasho, waxaanay lagama maar maan u tahay nolosha iyo horumarka qofkasta iyo bulsho kasta, Horumarkuna waxa uu ku xidhan yahay heerka aqooneed …
Ilmahaagu wuxu zaaid kugu baahanyahey marku yaryahay, waa marka bari laheed asaasiga nolosha. La sheekeyso: Ilmahaga oo aad la sheekeysata waxey ku sahlaysa iney saaxiib kula noqdaan oo aanay waxba ka qarin. Hadaad markasta aad is aragtan sheekadiinu tahay iskuul aad, seexo, iyo amar ku jira hadalkaga oo dhan. Ilmuhu wuxu dareemaya kalsooni daro oo inaadan aaminsanayn ayuu dareemi, iska …
Hab Buu Ubadku Tabayaa W/Q : ladna Rashiid
Korinta ubadku waa mid kamid ah masuuliyadaha ugu adag ee inala so darsi kara. Sidaas ay tahay hadana waa masuuliyad cid kasta wax dhashaa is aragto uun iyadoo madaxa ku qaaday iyadoon wax tababar ah ama khibrad ah na loo lahayn.inta badan dadku markay wax dhalaan waxay tixraacan qaabki iyaga loo koriyay. Marar badan waxa dhacda in waalidka ilmaha dhalay …